हङकङमा ‘ब्लाइन्ड रक्स’ प्रिमियर, हेर्नेका आँखा रसाए ! « Ramailo छ
हङकङमा ‘ब्लाइन्ड रक्स’ प्रिमियर, हेर्नेका आँखा रसाए !
समय : 3:26 pm
लन्डनका दुई दर्जन शहरमा प्रदर्शनपछि फिल्म ‘ब्लाइन्ड रक्स’ लाई हङकङमा प्रिमियर गरिएको छ । चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्रमा नेपाली डायस्पोराले सोमबार प्रिमियर गरिएको हो । निर्माता निकेश लिम्बु लन्डनबाट प्रिमियरमा सहभागि हुन हङकङ पुगे । उनका अनुसार फिल्मलाई रुचाइएको छ ।
‘हेर्नेमध्ये धेरैका आँखा रसाए’ उनले भने, ‘ज्ञान र मनोरञ्जनले दर्शकलाई बाँध्यो ।’ निर्माता लिम्बुलाई उक्त अवसरमा आयोजक संस्था नेपाल चलचित्र एसोसिएसनले सम्मान गरेको थियो । अध्यक्ष राजु राईले सम्मान प्रदान गरे । मिलन चाम्स निर्देशित बायोपिक १८ गते नेपालभर प्रदर्शन हुँदैछ । रिलिज अगाडि भीआइपी सो समेत आयोजना गरिएको छ ।
किशोरावस्थमा दृष्टि गुमाएकी युवती सृष्टि केसीको जीवनमाथि बनेको फिल्ममा बेनिशा हमालले मुख्य भूमिका पोएट्रे गरेकी छन् । गौरी मल्ल, अर्पण थापा, अनिल शाह लगायत समेत छन् ।